Olan’ny famatsiana solika Hita ihany ny marimaritra iraisana
Mpivarotra teny Soamandrakizay Hanadihady ny fiadidian’ny Repoblika
Taorian’ny fitarainana nataon’ireo mpivarotra hani-masaka teny Soamandrakizay ny faran’ny herinandro teo noho ny fatiantoka nahazo azy ireo dia namaly avy hatrany ny teo anivon’ny fiadidian’ny Repoblika omaly.
Nahita marimaritra iraisana momba ny saran' ny fitaterana solika ireo mpitatitra akoranafo eto Madagasikara.
Efa herinandro maromaro no nikaon-doha ny orinasa Logistique Pétrolière SA (LPSA) sy ny fikambanana matihanina mpitatitra akoranafo sy solika (APTH) niarahana tamin' ny minisiteran' ny angovo sy akoranafo ary ny ofisim-pirenena misahana ny akoranafo (OMH). Nivoitra tamin' izany ny fifanarahana, izay haharitra 24 volana, miantoka famatsiana solika manerana ny nosy. Fifanarahana izay manome antoka amin' ny fisian' ny tahiry isaky ny tobin-tsolika mba hampisinda ny ahiahy amin’ny mety ho fahalanian’ny solika eto Madagasikara. Ankoatra izay, mba ahafahana manatsara ny fampandehanan-draharaha eo amin'ity sehatra ity dia hajoro ny vaomiera ara-teknika hisahana ny fanaraha-maso sy ny fijerena vahaolana maharitra. Hiverina amin' ny laoniny ny famatsiana solika manerana ny nosy.